I-KDE iyaqhubeka nokulungiselela iPlasma 5.21 kunye neeNkqubo-sikhokelo 5.78 | Ubunlog
Kuyamangalisa xa usebenzisa isoftware kwaye uyaqonda ukuba ayinamsebenzi usisiseko. Ngapha koko, ayenzekanga ngqo kum ngoluhlobo, kuba lo msebenzi andikaze ndiwusebenzise, ​​kodwa uNate Graham ubuyile iposti un Inqaku malunga nento eyenziwa yi KDE kwaye into yokuqala ayikhankanyayo yinto entsha ku-Elisa endicinga ukuba bekufanele ukuba bekukho kwasekuqaleni, kodwa bekungekho.
Ubutsha obuzakongezwa ngumdlali we KDE ngo-Epreli 2021 buya kuba nakho ukuphinda ingoma kaninzi, hayi ii-albhamu kunye noluhlu lokudlalwayo. Njengesiqhelo, enye iindaba kunye neenguqu eziza kubakho kwikamva kwenye yeidesktops ezithandwa kakhulu luluntu lweLinux, ayikho enye ngaphandle kwePlasma ene-KDE zokusebenza kunye neelayibrari zayo.
1 Iindaba Ezizayo Kungekudala kwi KDE
Iindaba Ezizayo Kungekudala kwi KDE
U-Elisa usivumela ukuba siphindaphinde ingoma yangoku ephindaphindayo kwaye kwakhona ukuba sikhetha (uElisa 21.04).
Iwijethi yePlasma Timers ngoku inephepha elidwelise konke ukubala kwangaphambili, ukuvumela ukuba sizitshintshe okanye songeze ezethu (iPlasma 5.21).
Ngoku sinokumisela ubungakanani be icon ezisisigxina kwizinto ezikwiindawo ezivulekileyo / zokugcina iincoko zababini (iiNkqubo-sikhokelo 5.78).
Xa usebenzisa umbono weefayile zika-Elisa, ucofa amaqhosha okudlala okanye emgceni kwizinto zegridi ngoku ziyasebenza (uElisa 20.12.1).
U-Elisa akasanyusi ukusetyenziswa kwePlasma CPU ngelixa edlala umculo (uElisa 20.12.1).
Umboniso awusacothisi ngamanye amaxesha xa ngaphezulu kwesikrini esinye sithathwa ngokulandelelana ngokukhawuleza (iSpecial 20.12.1).
Iintlanganiso / ii-screencast zisebenzisa iWebRTC ngoku zisebenza kwiseshoni yePlasma Wayland (iPlasma 5.20.5).
Ikhibhodi ebonakalayo kwisitshixo kunye nescreen sokungena asisayigqibi indawo yegama eligqithisiweyo xa livela (iPlasma 5.20.5).
Xa ujonga iinkcukacha zolu setyenziso kuVumbulula, incam yesixhobo esimnandi esincinci kwilayisensi yeapps ayisasebenzi rhoqo; ngoku ibonakala kuphela xa ubhabha ngaphezulu kwekhonkco ukuya kwisicatshulwa esipheleleyo selayisensi yakho, njengoko kulindelwe (iPlasma 5.20.5).
Iapplet yamahlaya ngoku ibonisa ii-icon kwiithebhu zebar ye-tab, njengoko yayihlala injalo (iPlasma 5.20.5).
Umyalezo wesibambisi se-applet yeBluetooth ngoku ubonakalisa isicatshulwa esifanelekileyo xa iBluetooth icimile (iPlasma 5.21).
Xa sitshintsha i-avatar yomsebenzisi kwiphepha labasebenzisi lokhetho lweNkqubo, umfanekiso oboniswe kuluhlu lomsebenzisi ngoku utshintsha kwangoko (iPlasma 5.21).
Amaqhosha okuhamba ngasemva nangaphambili okuhamba ngesoftware esekwe eKirigami akusekho ngamanye amaxesha ukuhlangana negama lekhasi langoku (iiNkqubo-sikhokelo 5.78).
Ukufaka kunye nokususa amaqhosha kuFumanisa akusakhangeleki kungaqhelekanga kwaye kune icon engabonakaliyo; Ngoku basebenzisa isitayile esisezantsi kwaye baphinde bayikhumbula kwakhona i-icon (iiNkqubo-sikhokelo 5.78).
Ubungakanani beefestile ze-KDE kunye nezikhundla ziphinde zikhunjulwe ngokuchanekileyo kwisoftware ye KDE eqhuba kwiWindows (iiNkqubo-sikhokelo 5.78).
Iifayile ze-KDE windows ngamanye amaxesha azisavuleki kwimeko ephezulu xa zingenakwandiswa ngexesha lokugqibela kwabo ukuvalwa (iiNkqubo-sikhokelo 5.78).
Ifestile yoqwalaselo ka-Elisa ifumene ukuphuculwa kunye nokuphuculwa konxibelelwano lwayo (Elisa 21.04).
Isalatha somkhondo we-Elisa esalindelweyo ngoku uhlala emazantsi kuluhlu lokudlala ecaleni kwenani lilonke leetraki (Elisa 21.04).
I-applet yeBluetooth kunye nephepha layo kwiiNkqubo ezikhethwayo ngoku zibonisa izixhobo ezidityanisiweyo; izixhobo ezikhoyo ziboniswa kuluhlu olwahlukileyo, kubonakala kuphela xa kusongezwa izixhobo ezitsha (5.20.5).
Ngoku kukho iindlela ezimfutshane ezimiselweyo zokuhambisa iwindows esebenzayo kwenye idesktop ebonakalayo (Meta + Ctrl + Shift + arrow keys) nakwesinye isikrini (Meta + Shift + arrow keys) (Plasma 5.21).
Xa ufumana iifayile ngeBluetooth, isaziso esiboniswe kwiscreen ngoku sinolwazi lokuba zingaphi iifayile ezishiyekileyo kwaye ibonisa iqhosha "Vula kumphathi wefayile" xa ugqibile (iPlasma 5.21).
Ukuphucula ukubonakala kwee-avatars zomsebenzisi kumbono womkhethi we-avatar yomsebenzisi (iPlasma 5.21).
Emva kwexesha lokuqala ubeka ngesandla idiski ekhutshwayo, ngokungagqibekanga iya kunyuka ngokuzenzekelayo kuzo zonke izihlandlo ezilandelayo xa uyiqhagamshela (iPlasma 5.21).
Ukungagqibeki kwe "Mount" kunye ne "Unlock Vault" kwiiDiski nakwizixhobo zeapplets zePlasma kunye nePlasma Vault (ngokulandelanayo) zitshintshelwe "eNtabeni naseVulekileyo" nakwi "Vula kwaye Vula" ukugcina inyathelo elongezelelekileyo lokuvula ngesandla umphathi wefayile kwaye uhambe uye kwiindawo ezisanda kubakho. Kubantu abangakufuniyo oku, iintshukumo ezindala "zeNtaba ezingavulwanga kumphathi wefayile" kunye no "Vulela iVault ngaphandle kokubonisa umphathi wefayile" zisekhona, kodwa kwimbono eyandisiweyo endaweni yokuba zisetyenziswe njengezenzo ezingagqibekanga (iPlasma 5.21).
Iphepha lenkqubela phambili lomsebenzi lokuFumanisa ngoku libonisa isantya sokukhuphela kunye nexesha eliqikelelweyo lokugqitywa (iPlasma 5.21).
Ubungakanani besithonjana esineenkcukacha kwiNkqubo yoKhetho lweNkqubo yekhonkco ngokudideka akusanikezeli ukuvumela ukuseta ubungakanani beempawu ze 'Desktop', kuba khange butshintshe ubungakanani beefayile kunye neefolda kwidesktop (IPlasma 5.21).
IPlasma 5.21 iza ngoFebruwari 9 kunye nePlasma 5.20.5 baya kuyenza ngoLwesibini olandelayo, nge-5 kaJanuwari. Izicelo ze-KDE 20.12.1 ziya kufika nge-7 kaJanuwari, kwaye i-21.04 izakufika ngamanye amaxesha ngo-Epreli 2021. Izakhelo ze-KDE 5.78 ziya kuhlala ngoJanuwari 9.
Ukonwabela konke oku ngokukhawuleza kufuneka songeze i-KDE Backports repository okanye sisebenzise inkqubo yokusebenza enendawo yokugcina efana KDE neon okanye naluphi na usasazo olunemodeli yophuhliso yiRollling Release.
Ewe, oku kungasentla akuyi kudibana nePlasma 5.20 okanye 5.21, okanye hayi ngoKubuntu de kukhululwe uHirsute Hippo, njengoko besesitshilo ku Oku kubhaliwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » U-Elisa uya kongeza inqaku elitsha, kwaye i-KDE iyaqhubeka nokulungiselela iPlasma 5.21 kunye neeNkqubo-sikhokelo 5.78
I-Linux 5.10, ngoku ikhona inguqulelo entsha ye-LTS yekernel ngezi zinto zintsha